MW Biixi oo lagu wado in uu faahfaahin ka bixiyo kulankii Farmajo & imaantinkiisa - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka MW Biixi oo lagu wado in uu faahfaahin ka bixiyo kulankii Farmajo...
MW Biixi oo lagu wado in uu faahfaahin ka bixiyo kulankii Farmajo & imaantinkiisa
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi ayaa la filayaa in uu faah-faahin ka bixiyo Kulankii uu Madaxweyne Farmaajo kula soo qaatay caasimada Itoobiya ee Addis-Ababa.
Madaxweyne Biixi ayaa hortagi doona todobaadkan labada gole ee Baarlamaanka Somaliland, isagoona ka jeedin doona khudbad sanadeedkii Dastuuriga aheyd, midaasi oo la filayo in uu si gaar ah ugu warbixiyo natiijada kulankaasi iyo waxqabadka xukuumadiisa.
Biixi ayaa markuu Golaha hortago ka warbixin doona waxyaabihii ka soo baxay kulankii uu la qaatay Farmaajo, iyo waxa ka jirra safarka la sheegay in uu Madaxweyne Farmaajo ku iman doono magaalada Hargeysa.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa la filayaa in uu khudbadaasi ku soo qaato Raali-gelintii uu Farmaajo dhowaan siiyey reer Somaliland, taasi oo la xiriirtay xasuuqii ay dowladdii kacaankii ay ku qaaday gobolada Waqooyi.
Waxa kale oo uu Madaxweynuhu diirada saari doona khilaafka baahsan ee hadheeyay qabsoomida doorashooyinka iyo Komishanka cusub ee sii huriyey xiisada ka taagan doorashooyinka Somaliland.
Khudbada Madaxweynaha ee la filayo in uu todobaadkan ka horjeediyo Golaha ayaa noqon doonta mid uu si mug leh uga warbixiyo kulankii uu la qaatay Farmaajo oo ay dul hoganayaan su’aalo badan oo ay ka gaabsadeen labada dhinac ka jawaabidooda.
Previous articleDP World to Upgrade, Maintain Eritrean Ports
Next article(Sawir) RW Itoobiya oo gebi ahaanba ka saaray Somaliland qariiradda Somalia